Dybala: Milan waligeed bey ka calaacaleysay Juventus – Gool FM
Dybala: Milan waligeed bey ka calaacaleysay Juventus
Kaafi March 11, 2017
(Turin) 11 Mar 2017. Paulo Dybala ayaa meesha ka saaray eeda ah in dhex dhexaadiyihii xalay uu u xagliyey Juventus kaddib markii uu u dhigay gool ku laad daqiiqadii 97-aad.
Hogaamiyeyaasha waxaa lagu abaalmariyey gool ku laad muran dhaliyey kaddib markii laad jan jeer uu soo tuuray Stephan Lichtsteiner ay garabka uga dhacday Mattia De Sciglio waqtigii dhimashada ee dheesha iyada oo aysan u muuqan in ay ula kac ka ahayd daafaca.
Go’aankaas uu gaaray garsoore Davide Massa waxa uu ka carreysiiyey Milan iyada oo uu Davide Massa hore ciyaarta uga saaray Jose Sosa oo qaatay huruudigiisii labaad, laakiin Dybala waxa uu qabaa in Juventus ay ahayd in ay hesho gool ku laad qeybtii hore.
“Taageereyaasha Milan waxa aydood ka keenayeen Juventus ilaa lix sano,’ ayuu Dybala u sheegay Mediaset.
“Waan la qabsanay. Waa ina wax kale isku dayaan halkii ay ka calaacali lahaayeen garsooreyaasha.
“Waxaan la yaabanahay in uu qof soo hadal qaadi doono qaladkii uu Zapata igu galay qeybtii hore oo ahaan lahayd gool ku laad…..waa in aad daacad ahaataa.
“Marka wax ceynkan oo kale ah dhacaan, waan ka soconnaa oo shaqadeena wadannaa.”
Giggs oo xushay 11kii ugu wacnaa Man United ee uu ka garab dheelo abid
Manchester United oo ku soo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa Sanchez [Daily Express]